Wakiilka Matthijs de Ligt oo albaabada u furay u dhaqaaqista xidigan ee Premier League | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wakiilka Matthijs de Ligt oo albaabada u furay u dhaqaaqista xidigan ee...
Wakiilka Matthijs de Ligt oo albaabada u furay u dhaqaaqista xidigan ee Premier League
Mino Raiola ayaa xaqiijiyay in Matthijs de Ligt uu aad u doonayo in uu isaga tago kooxda Juventus uuna raadsado tartan cusub xagaaga dambe.
Si kastaba ha ahaatee, Juve ayaa ku dhibtooneysa Xili ciyaareedkan, iyagoo seegay horyaalka Seria A markii ugu horeysay tan iyo 2010-11 xilli ciyaareedkii hore, waxaana ay haatan ku jiraan kaalinta 7aad ee kala sareynta xilli ciyaareedkan.
Wakiilka De Ligt ayaa hadda xaqiijiyay in 22-sano jirkaan uu diyaar u yahay tallaabo cusub, wuxuuna daaha ka qaaday in u wareegidda Premier League uu noqon karo ajandaha cusub.
Kooxaha sida Chelsea , Manchester City , Manchester United iyo Tottenham Hotspur ayaa hore loogu tiriyaa inay xiiseynayaan De Ligt, laakiin Raiola ayaa sidoo kale xaqiijiyay in Barcelona , Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ay u badan tahay inay sidoo kale tartanka ku jiraan.
“Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen ognahay kooxaha lagu xuso Matthijs de Ligt ‘tallaabada xigta’. Waan arki doonaa xagaagan,” Raiola ayaa u sheegay NOS .
“Premier League? Haa sidoo kale Barcelona sidoo kale, ama Real Madrid ama Paris Saint-Germain.”
Chelsea ayaa loo maleynayaa inay ka mid tahay kooxaha aadka u xiiseynaya kabtankii hore ee Ajax, iyadoo daafacyada haatan ee Antonio Rudiger , Andreas Christensen iyo Cesar Azpilicueta ay dhamaantood ku dhow yihiin lixdii bilood ee ugu dambeysay qandaraaskooda Stamford Bridge.
Deg Deg Senator Xaaji Muuse Suudi Yalaxow oo dib loo doortay...
Deg Deg Farmaajo oo Qarsan waayay Cuqdada uu u qabo Siyaasiyiinta...
Meeqo dhinac ayuu Rooble ku adkaaday intii uu socday dagaalka isaga...